Kumhanya zvakadii kumhanya kunosvika mairi 750w mota magetsi mafuta bike kuenda | ebike Shuangye
musha Blog nhau Dzakamhanya zvakapetwa ka750w mota yemagetsi mafuta tire bike
Zuva ： 2020-08-14 Zvikamu:nhau/ Blog Views: 2,153 maonero
Imwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa nezvebikes ndeyekumhanya kwavo. Kazhinji, kumhanya kwakanyanya kunoreva kuti chengetedza nguva yakawanda munzira. Vazhinji vanhu vanowanzo sarudza yakakwira simba mota kuvabatsira kusvika pakumhanya kwakakodzera. Iyi 750w maviri mota mota magetsi mafuta tire bhazi inogona kuzadzisa zvaunoda. Yakakwira magetsi emagetsi mota inounza iwe yakakwira kutasva kumhanya, uye unakirwe nekunzwa kukwira kwe adrenaline uye inonakidza kutasva.
Inofananidzwa nemazhinji emakomo e bhasikoro ingoshandisa mota chete, kumberi nekumashure mavhiri emagetsi mafuta tire bhasikoro vanoshandisa 750w magetsi emagetsi zvichiteerana. Uye maviri ma motors anoita aya emagetsi mafuta tireti bhasikoro ave nemhando mbiri dzemota inoshanda mode kuburikidza nekodhi bhatani. Imwe ndeyemaviri motors anoshanda modhi yekukwira makomo, imwe iri kumashure mota inoshanda mode yekutasva kwezuva nezuva. Mota mbiri dzinounza mutasvi sarudzo yemaviri mota inoshanda modhi, uye akasiyana kukwira kumhanya kunoenderana nemhando dzakasiyana dzekutasva. Kana uchingoshandisa 750w yekumashure mota inoshanda mode kukwira iyi yemagetsi mafuta tireti bhasikoro, iyo yekumhanyisa kumhanya iri 40-50km / h; asi shandisa maviri mota anoshanda modhi anogona kuita emagetsi bhatiri emagetsi emabhasikoro anosvika padanho repamusoro 45-55km / h.
55km / h max kumhanya kunoita kuti unzwe sekukwira mudhudhudhu munzira. Uye 750w maviri mota motors inopa yakakwana uye yakasimba simba zvinoita magetsi emagetsi dhiri bhasikoro rinogona kuvhara zvakasununguka pakati pesango nemakomo. Saka kunyangwe kunze kwekunze mutambo, kuenda, kufamba kwemazuva ese kana mapfupi nzendo, iyi magetsi emagetsi bike bike vese vanogona kusangana. Zvino, isu tinoziva nekukurumidza sei 750w maviri maviri mota mota bike anogona kukwira. Ita shuwa kuti e-bhasikoro inogona kukwira kuenda kumberi, inoshandisa 60v 18ah hombe yehukuru lithiamu bhatiri semagetsi. Uye dhizaini inobvisa iri nyore kwazvo kuti mushandisi atore bhatiri nekiyi uye kutsvaga nzvimbo ine zvigadziko zvekubhadhara, munongoda maawa masere - matanhatu apera imwechete yakazara chijairo ne6V 8A charger yakapihwa. Bhatiri ita chokwadi chekuti bhatiri remagetsi rakabhejerwa ane simba rakaringana rekuchengeta kumhanya kwakakura pakati pe71.4km / h uye 3 km / h.
Matairi emafuta zvakare anobatsira kuchengetedza mafuta emagetsi bhasikoro kutasva mushe panguva yekumhanya kwakanyanya. Kune vanhu vakasiyana kukwirira uye vanhu vanoda, pane maviri akaenzana mafuta tire vhiri saizi iwe yaunogona kusarudza. Imwe ndeye 26 "* 4.0 mafuta tai kune vanhu varefu kana avo vanofarira 26-inch fat tire uye gomo riri munzira, imwe i20" * 4.0 mafuta vhiri kune vanhu vazhinji, semuenzaniso, vakuru, vakadzi, collage vadzidzi uye vafambi. Kana vatyairi vachityaira bhasikoro mazana manomwe nemakumi mashanu emabhasikoro emagetsi ne750-50km max kumhanyisa, ingave 55-inch mafuta tai kana 26-inch mafuta tai inogara ichipa zvakanyanya kubata kudzivirira tireti, ive yakakwana anti-slip athari. Chero chaunoshandisa iyi 20w maviri emagetsi emagetsi emagetsi bhasikoro kuenda, kuenda, kufamba munzira, mutambo wekunze, kufamba kwezuva nezuva, mafuta tai inopawo vatyairi ruzivo rwakanaka nekuda kweye buffer mhedzisiro yekuchengeta kumeso uye kwakadzikama kutasva nekumhanyisa mhanyisa.
Taura nekumhanya, kumedura zvakare chikamu chakakosha chemagetsi emagetsi emabhasikoro. Chete yepamusoro-soro braking system ndiyo inogona kumisa bhasikoro remagetsi richimhanya zvine mhanyisa. Nekuti yemhando yepamusoro mabhureki system inogona kuona kuti vatyairi vakatasva chengetedzo pakumhanya-mhanyisa mamiriro. Saka 750w mbiri mota yemagetsi mafuta bhasikoro rakashongedzerwa ne180mm mechanical disc brake kumberi neshure vhiri, iro rine simba rakawanda rekumisa broki, kunyangwe iri pasi-gomo, kuchinaya, mamiriro ekukurumidzira. Kana iwe uchinzwa 750w huviri mota yemagetsi bhasikoro's mota paramende iri pamusoro kupfuura iwe zvaunoda, kune zvakare kune 500w maviri maviri emagetsi emagetsi bhasikoro ine 48v lithium bhatiri pamwe chinja chako chinodikanwa.
Kana iwe uchifarira mbiri mota mota bhasikoro uye uchida kuziva zvakawanda, iwe unogona kutarisa zvakapfuura zvinyorwa kana kushanyira edu Official Website, Sarudzawo kusiya meseji yako pazasi.
Tags:bhatiri powered bikes emagetsi mota bikes
Prev: Ndeipi Akanaka Magetsi Mabhasiketi Under $ 1000
Next: Zvakanakira kutenga mota yemagetsi moped